ကောလူမျိုး - ဝီကီပီးဒီးယား
၁ အာခါလူမျိုးများ၏ နောက်ခံသမိုင်း
၂ ရေကြည်ရာမြက်နုရာသို့ ပျံနှံ့သွားခြင်း
၃ တောင်ပေါ်နေတိုင်းရင်းသား အာခါလူမျိုး
၄ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ ဝင်ရောက်လာခြင်း
၅ အာခါရွာနှင့် ချစ်စရာ့ဓလေ့များ
၉ အာခါတိုင်းရင်းသားတို့၏ ကိုယ်ပိုင်ဟန်
၁၀ အာခါတိုင်းရင်းသားတို့၏ ဝတ်စားဆင်ယင်မှု
၁၁ အာခါဘိုးဘေးတို့၏ ဦးတည်ချက်များ
၁၂ အာခါလူမျိုးတိုင်း မှတ်သားထားရမည့် မျိုးနွယ်စဉ်ဆက်ဆင်းသက်လာပုံ
၁၃ အာခါလူမျိုးတို့၏ မျိုးဆက်အမည်ထိန်းသိမ်းခြင်း
မိမိတို့ကိုယ်ကို အာခါဟုခေါ်ကြပြီး ကျာနီကူ(Za nyi gu)ဟု အမည်တွင်သော အခါလူမျိုးများသည် တရုတ်ပြည်အနောက်တောင်ပိုင်း၊ မြန်မာပြည်အရှေ့ပိုင်း၊ လောနိုင်ငံအနောက်ပိုင်း၊ ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းနှင့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်းမှ တောင်တန်းတောင်ပေါ်တစ်လျှောက်တွင် အခြားလူမျိုးစုများနှင့် ရောနှောလျက်ရွာများတွင် နေထိုင်ကြသည်။  တရုတ်ပြည်၏ မြစ်နီမြစ်ဒေသတွင် အလွန်ဆွေမျိုးနီးစပ်မှုရှိသော အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ နေထိုင်ကြပြီး၊ ၎င်းတို့ကို ဟနီး(Hani)ဟုခေါ်ကြသည်။ ကျာနီ(Za Nyi)သည် အာခါများ မိမိတို့ကိုယ်ကို ခေါ်ဝေါ်သော အမည်ဟောင်းများ ဖြစ်ပြီး၊ ကဗျာလင်္ကာများတွင် အသုံးပြုဆဲဖြစ်သည်။ ဟနီးများ၏ လူဦးရေမှာ (၁.၂)သန်းကျော်ရှိပြီး၊ ယင်းတို့ အနက်မှ လူပေါင်း(၉၀၀၀၀၀) ခန့် ပြောသောဒေသစကားမှာ အာခါတို့၏ စကားနှင့် နီးစပ်မှုရှိသည်။  တရုတ်ပြည်တောင်ပိုင်းမှ ပိုင်ယွဲ့၊ ပိုင်ဖူနှင့် တိချံ(Bai-Yue, Bai-Pu and Di-Qiang) တို့မှာ အဓိက ရှေးဟောင်းလူဦးရေ အဆက်အနွယ်ဖြစ်ပြီး၊ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၂၀၀၀ ကတည်းကတည်ရှိခဲ့ကြသည်။ ပိုင်ယွဲ့ နှင့် ပိုင်ဖူတို့မှာ တရုတ်ပြည်တောင်ပိုင်းတွင် နေထိုင်ကြသော် ရှေးဟောင်းလူအုပ်စုများဖြစ်ကြပြီး ဟဲမူတူ(He-Mu-Du) ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ဆက်စပ်လျက်ရှိကာ အလယ်ပိုင်းနိမ့်ကျသော ယန်စီမြစ်ချိုင့်ဝှမ်းတွင် လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း (၇၀၀၀)ခန့်က ရှိနေသောသူများ ဖြစ်သည်။ ကျောက်ခေတ်သမိုင်းသုတေသီများ၏ ရှာဖွေတွေ့ရှိချက်အရ၊ ပိုင်ယွဲ့ နှင့် ပိုင်ဖူ တို့ ယူနန်ပြည်နယ်တွင် နေထိုင်ခဲ့ကြသည်မှာ လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း (၄၀၀၀) ခန့်က ဖြစ်သည်ဟု ဖြစ်သည်။ ယနေ့လက်ရှိ တိုင်၊ ရွှေနှင့် ကျွမ့် (Dai, Shui and Zhuang)တို့သည် ပိုင်ယွဲ့မှ ဆင်းသက်လာခဲ့ကြသည် ဖြစ်ပြီး၊ "ဝ"၊ တအာင်းနှင့် ပလန်(Wa, Deang and Blang)တို့မှာ ပိုင်ဖူမှ ဆင်းသက်လာခဲ့ကြသူများဖြစ်သည်။ ယီ၊ ပိုင်၊ ဟနီး၊ လီဆူ၊ လားဟူ၊ နာရ‌ှီ၊ကျင်းဖော (ဂျိမ်းဖော)၊ တိဗက်၊ ပုယီ၊ ဖုမီ၊ အချန်၊ နွီး(နူ)၊ ဂျင်နု နှင့် တုလုံ (Yi, Bai, Hani, Lisu, Lahu, Naxi, Jingpo, Tibetan, Buyi, Pumi, A Chang, Nu, Jinuo and Dulong) တို့သည် ယနေ့ ယူနန်ပြည်နယ်ရှိ ဒီကင်မှ ဆင်းသက်လာခဲ့ကြသူများဖြစ်သည်။ ဒီကင်တို့သည် ဇန့် (Tibet) - မီယန်(Zang - Mien) မှ လာခဲ့ကြသည်ဖြစ်ပြီး၊ ထိုနေရာသည်ရှည်မျောသောနေရာ အဝန်းဖြစ်ပြီး မြစ်ဝါမြစ်အထက်ပိုင်းမှ အလယ် အောက်မြစ်ဝါမြစ်ချိုမ့်ဝှမ်းတွင်ရှိကာ လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း(၈၅၀၀) ကတည်းက နေထိုင်ခဲ့ကြသည်။ ဒီကင်တို့၏ အဓိကကျသည့် ယူနန်ပြည်နယ်သို့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ခြင်းသည် ချင်မင်းဆက် (Qin Dynasty) အချိန်က ဖြစ်ပြီး၊ လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း (၂၇၀၀)ခန့်က ဖြစ်သည်။ ဘာသာစကားဗေဒအရပြောရပါလျှင် ပိုင်ယွဲ့၊ ပိုင်ဖူနှင့် ဒီကင်တို့သည် ဒိတ်၊ ဩစထရို - အေရှ နှင့် တိဗက် - မြန်မာ(Daic, Astro Asiatic and Tibeto-Burman) တည်းဟူသော ဆီနို-တိဗက်ဘာသာစကားမိသားစု (Sino-Tibetan Language Family)၏ ထပ်ဆင့်ပွားများ ဖြစ်ကြကာ ဘိုင်းယူသည် ဒိတ် နှင့်လည်းကောင်း၊ ဘိုင်းပူသည် ဩစထရို - အေရှနှင့် လည်းကောင်း၊ ဒီကင်သည် တိဗက်-မြန်မာနှင့်လည်းကောင်း အသီးသီးဆက်စပ်မှုရှိနေပါသည်။  သမိုင်းကဖော်ပြသည်မှာ ဟေးယစ်(Heyis)ဟု အမည်တွင်သော မျိုးနွယ်စုတစ်ခုသည် B.C ၃ ရာစုတွင် တတူ(Dadu) မြစ်၏ တောင်ဘက်တွင်သွားလာနေထိုင်ခဲ့ကြသည်ဟုဖြစ်သည်။ ထိုသူများမှာ ဟနီး(Hanis) ဟု ခေါ်သော ယနေ့လူများ၏ ဘိုးဘွားဘီဘင်များဖြစ်နိုင်ချေရှိသည်။ မှတ်တမ်းများဆက်လက်ဖော်ပြထားသည်မှာ ၎င်းတို့သည် တရားဝင်စာရင်းသွင်းခြင်းခံရသူများဖြစ်သွားပြီး၊ ထိုနန်းဆက်၏ လက်အောက်ခံများ ဖြစ်သွားခဲ့ကြသည်။  အခြားမှတ်တမ်းများက အလားတူဖော်ပြသည်မှာ အာခါ/ဟနီးတို့သည် ယူနန်သို့ A.D အစဦးရာစုများ တွင်ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့ကြသည်ဟူ၍ဖြစ်သည်။ အာခါတို့သည် အခြားအုပ်စုများနှင့် အတူတကွ နေထိုင်ခဲ့ကြပေ လိမ့်မည်။ အချို့ထင်မြင်ယူဆချက်မှာ လွန်ခဲ့သော ကာလရှည်လျားလှသော အချိန် ယီ/ဟနီးတို့ မူလ အစသည် တိဗက် အရှေ့ပိုင်းဖြစ်ပေလိမ့်မည်ဟုဖြစ်သည်။ အချို့စော-ကတက်ကြသည်မှာ ရှဲချွန် (Szechuan)လွင်ပြင်များသည် မူလနေထိုင်ရာ အရပ်သာ၍ဖြစ်နိုင်သည်ဟူ၍ဖြစ်သည်။ 
အာခါလူမျိုးများသည် ရွာသစ်တည်ရန် လိုအပ်သည့်အခါတွင် ရွာအကြီးအကဲ၊ ပန်းပဲဆရာနှင့် နတ်ဆရာ (၃) ဦးတို့သည် ရွာအကြီးအကဲက ဦးစီးပြီး သင့်တော်မည့်နေရာ ရွေးချယ်ကာ မြေမျက်နှာပြင်တွင် မြေညှိ၍ မြေမာအောင် ထုပြီးနောက် ဤနေရာတွင် ရွာတည်သင့် မသင့် (ဇွေမား) ခေါ် ရွာအကြီးအကဲသည် လတ်ဆတ်သန့်ရှင်းသော ကြက်ဥအစိမ်းတစ်လုံးကိုယူ၍ ဘိုးဘေးများကို တိုင်တည်ပြီး အဓိဋ္ဌာန်ပြုရာတွင် ကြက်ဥကို ညာဘက်နားရွက်မှ ကိုင်၍ လွှတ်ချလိုက်ရသည်။ ထိုလွှတ်ချလိုက်သည့် ကြက်ဥကွဲခဲ့သော် ထိုနေရာတွင် ရွာတည်ရန် သတ်မှတ်ရသည်။ အကယ်၍ ရွာအကြီးအကဲက လွှတ်ချလိုက်သော ကြက်ဥမကွဲခဲ့သော် ထိုနေရာသည် နတ်များနေထိုင်ရာ၊ နတ်မွေ့လျော်ရာ အပေါ်၌ ကြက်ဥ ကျမကွဲခြင်းဖြစ်သည့်အတွက် ရွာတည်ရန် မသင့်ဟု သတ်မှတ်ကာ အခြားတစ်နေရာသို့ နေရာပြောင်းရွှေ့ရှာဖွေရသည်။ ရွာသစ်တည်ရန် သတ်မှတ်လိုက်သော မြေနေရာ အကျယ်အဝန်းရှိ သစ်ပင်များ၊ ချုံနွယ်ပင်များ၊ ခုတ်ထွင်ရှင်းလင်း၍ ရွာဝင်/ထွက်တံခါး (လန်းခန်) နှင့် ရွာဝင်တံခါးနတ်စင်၊ အပျိုလူပျို ချိန်းတွေ့မည့် (ဒယ်းခန်း) ခေါ် မြေညီကွင်း၊ လူသေမြှုပ်ရန် သင်္ချိုင်းမြေနေရာများ ရွေးချယ်ပြီး ခုတ်ထွင် ရှင်းလင်းထားသော အမှိုက်သရိုက်များကို စုပုံ၍ (ဖီးမား) ခေါ် နတ်ဆရာသည် ဘိုးဘေးများအား ရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် တိုင်တည်၍ မီးရှို့ရသည်။ ထို့နောက် ရက်ကောင်းရက်မြတ်ကို ရွေးချယ်ပြီး ( ကျား၊ သိုး၊ မျောက် ) နေ့များမှအပ ကျန်နေ့ရက်များကို ရွေးချယ်၍ ကြက်ဥကွဲသောနေရာတွင် (ဇွေမား) ခေါ် ရွာအကြီးအကဲ၏ အိမ်ကို ဦးစွာဆောက်လုပ်ရသည်။ ရွာအကြီးအကဲ၏ အိမ်ဆောက်လုပ်ပြီးမှ ရွာသားများ၏ အိမ်ကို ဆောက်လုပ်ရသည်။ အာခါလူမျိုးများ အမြတ်တနိုးထားသော နတ်စင်ကို မိမိရွာကဖြစ်စေ၊ တခြားရွာကဖြစ်စေ မြင်းစီးလျက် ရွာဝင်မုဒ်ကို ဖြတ်မကျော်ရ။ နတ်စင်ကို မြင်းပေါ်ကဆင်း၍ ဖြတ်လျှောက်ရသည်။ နတ်စင်ကို အရိုအသေမဲ့ထိခြင်း၊ ဖျက်စီးခြင်းမပြုရ။ ပြုလုပ်ခဲ့သော် ရွာသို့ လျော်ကြေးပေးရသည်။
အာခါတိုင်းရင်းသား လူမျိုးများသည် နေအိမ်ဆောက်လုပ်ရာတွင် ခြေတံရှည်အိမ်၊ အိမ်တံခါးမကြီး အရှေ့ဘက်တစ်ပေါက်၊ အနောက်ဘက်တစ်ပေါက်ထားပြီး၊ ပြူတင်းပေါက်ဟူ၍မထားဘဲ အိမ်အမိုးသည် သက်ကယ်ဖြင့် တိုင်ခြေ မထိတထိမိုးကြသည်။ အိမ်အတွင်းတွင် တခြမ်း၌ အိမ်ရှင်မိန်းမနေရန်နှင့် တဘက်ခြမ်းတွင် အိမ်ရှင်ယောက်ျားသည် နေထွက်ရာရှေ့ဘက်ပေါက်တွင် နေထိုင်ရပြီး၊ အိမ်ရှင်မိန်းမနှင့် ကလေးများသည် အနောက်ဘက်ခြမ်းတွင် နေထိုင်ရသည်။ အိမ်အတွင်းတွင် အခန်း(၂)ခန်းဖွဲ့ထားသကဲ့သို့ မီးဖို (၂)ခုရှိသည်။ တက်/ဆင်း နိုင်ရန် လှေကား (၂)ခုထားရသည်။ အိမ်ရှင်ယောက်ျားနေသည့်ဘက်၌ ရပ်နီး/ရပ်ဝေး ဧည့်သည်များ ဧည့်ခံခြင်းပြုရသည်။ အိမ်ရှင်မိန်းမနေသည့်ဘက်တွင် ဧည့်သည်ယောက်ျား သွားလာခွင့်မပြုရ။ ထမင်းချက်ရန် အိမ်ရှင်မိန်းမနေသည့်ဘက်က မီးဖိုကိုသုံးပြီး၊ အိမ်ရှင်ယောက်ျား နေသည့်ဘက်တွင် ရေနွေးသောက်ရန် အတွက်သာသုံးသည်။
အာခါလူမျိုးတိုင်း မှတ်သားထားရမည့် မျိုးနွယ်စဉ်ဆက်ဆင်းသက်လာပုံ[ပြင်ဆင်ရန်]
↑ မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း အတွဲ (၁)၊ စာမျက်နှာ (၂၆၆)။
↑ (Bisht, Barendra S. and T.s Bankoti. 2004)
↑ (Bradley, David, January 1999)
↑ (Li Jin et al.,2001)
↑ (Ma Yin. 1989)
↑ (West, Barbara A. 2009; Wiens, Herold.1967; Bradley, David 1979; Boucherie, Pascal. 1995, Vol. I)
↑ (ဝင် ဂျန်စီး၏ အာခါလူမျိုးတို့၏ ထွက်မြောက်ရာ စာအုပ်)
↑ (တရုတ်ပညာရှင် မစ္စတာယန်ကျုံးမင်)
↑ ဦးလောယွမ် နှင့် လျိုစုမင်တို့၏ သုတေသန လေ့လာတွေ့ရှိချက်
↑ (အမေရိကန် စာရေးဆရာ ကိုလန်ဖိစ်)
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ကောလူမျိုး&oldid=705461" မှ ရယူရန်